Izindaba - Imisebenzi yokwakha iqembu ye-Hebei Tomato 2019
U-Hebei Tomato wahlehlisa imisebenzi yokwakhiwa kwamaqembu emikhulu kakhulu yonyaka kusukela ngo-Agasti 9 kuya ku-13, 2019.
Ukuze unothise isikhathi sokuphumula sabasebenzi, unciphise ingcindezi yomsebenzi, uthuthukise ukuxhumana nokuxhumana phakathi kwabasebenzi, uqinise ukuhlangana kwethimba namandla amakhulu, futhi uhlele umsebenzi ongalibaleki wokwakha iqembu e-Hebei Utamatisi.
Ngosuku lokuqala, indiza yabambezeleka ngenxa yesimo sezulu. Ngenhlanhla safika kahle.
Ngosuku lwesibili, sathatha imoto esasihamba emgwaqeni sinqamula ezweni elinotshani laseHulunbeier elingenamuntu, safika ezindaweni eziphakeme zoMfula iMozhrad, futhi sanambitha “Umkhosi Wamaqembu Ayisishiyagalombili” weBanquet kanye ne-Fortune Eight. Ntambama, ngavakashela i-Erguna National Wetland, ngidlula esiQhingini Esimnyama, ihlathi lezingulube zasendle, ihlathi lika-eucalyptus, isiqhingi sezinyoni, iKang Street, ulwandle lwezimbali ezingamaxhaphozi nezinye izindawo ezinhle. Umfula wezimpande ocacile ugeleza buthule, futhi amanzi agobile azungeze idlelo nolwandle. Izihlahla zihlahla futhi ziluhlaza. Fika eGenhe kusihlwa bese unambitha isitshulu sendawo ekhethekile. Ngemuva kokudla okugcwele, hlala egumbini okulindelwe isikhathi eside.
Ngosuku lwesithathu, saqala ukuvakashela iLulu Guya Reindeer Park, ebizwa ngokuthi “isizwe sokuzingela” sokugcina eChina. Yilona kuphela izwe eChina elikhulisa ama-reindeer. Ifika eSahuan Ranch emini, idabule ehlathini le-birch, bese ingena eMontenegro kusihlwa ukuzwa ukugibela ihhashi. Iphathi lomlilo, lakusihlwa lomlilo, lijabulela ukunambitheka kwezimvu eziphekiwe zonke, zihlala ku-yurt, zizwa imisebenzi emnandi ngesitayela saseMongolia.
Ngosuku lwesine, ngasemfuleni i-Erguna oluleke okwesibhakabhaka, sahamba ngomgwaqo womngcele weSino-Russia. Ukubukeka okuhle kwendlela kudambise ingcindezi yabasebenzi. Izindawo ezinotshani ezinkulu zanweba isifuba futhi zaqinisa ukuhlangana kwethu. Kusihlwa eManzhouli, jabulela izigcawu ezinhle zobusuku obungajwayelekile.
Ngosuku lwesihlanu, wavakashela umncintiswano wamahhashi esizweni saseMongolia sikaBalhu, futhi waqeda kusihlwa kusihlwa.
Ngalo msebenzi wokwakha iqembu, ubumbano kanye nokusebenza ngempumelelo kwabasebenzi kuye kwajuliswa, futhi ukuxhumana okuthe cwaka phakathi kwabo kuye kwajuliswa. Ukuqondana kuthuthukisiwe, imizwa isondelwe, futhi wonke umuntu ucwiliswe esimweni esingcono nasentshisekelweni ephezulu. Emsebenzini ozayo, siqinise ukuzethemba nokuzimisela kwethu ukuqinisa u-Hebei Temet.